eThekwini Living Legends – Desmond Makhanya (isiZulu)
Desmond Makhanya (isiZulu)
Ngokukhulu ukudabuka simemezela ukudlula emhlabeni kukaDesmond Makhanya oyi- 2013 eThekwini Living Legend. UMakhanya wazelelwa eduze nase Adam’s Mission ngo 1935, wadlula emhlabeni mhla ziyi 16 July 2016, eneminyaka engu 80. Ushiye emhlabeni unkosikazi wakhe, izingane ezinhlanu kanye nabazukulu abahlanu.
Waqala isikole samabanga aphansi eneminyaka eyisikhombisa e-Adams College, eyesizukulwane sesine emndenini wakhe ukufunda khona. Wafunda kulelikolishi waze waqeda umatikuletsheni ngonyaka ka1954. Ubenobudlelwano nalesikhungo esidumile sezemfundo impilo yakhe yonke, esesigungwini sokuphatha sesikole kusukela ngo 1999-2006. Njengomuntu owazibeka njengosomlando noma ngokubhala umlando walelikolishi ubaziwa njengo ‘mgcini womlando obesaphila we Adams College’.
Ngemuva kokuqeda kwakhe kulelikolishi, wasebenza iminyaka emithathu eMc Cord’s Hospital wase eqhubeka nezifundo zakhe eFort Cox Agricultural College, eMpumalanga Kapa kusukela ngo 1958-1960. Kusukela ku 1961-1989 usebenze kwa SAPPI SAICCOR Mill, eMkhomazi.
UDesmond Makhanya uqale ukubhala umlando wakhe we Adams College ngo 1998 esebenzisa ulwazi abeluthola ezincwadini eKillie Campbell Africana Library, ukuchaza kabanzi nangolwakhe ulwazi kanye nomlando abewuqokelela ngokuxoxisana nabanye abantu. Lombhalo ongakashicilelwa, uveza umlando wonke we Adams Mission kanye ne Adams College, kusukela ngo 1853 – 2003 ngesikhathi sokufika kwabefundisi. Inandiswe nayindlela achaza ngayo izinto ezazenzeka kudala kanye nezindatshana ezavelela yena uqobo uMakhanya,
Nakuba uDesmond Makhanya ebhale kakhulu ngomlando nokushintsha okwalethwa ngabefundisi kanye nemizamo yobaba mkhulu bakhe, ubekhathazekile futhi nangentuthuko eyenzekayo. Umsebenzi wakhe ubewuchaza njengowomuntu othuthukisa umphakathi. Nomsebenzi abewenza noNgqongqoshe wezeMpilo kanye namakhosi endawo wawuhlose ukuthuthukisa izinga lobubha ngokulima. Lama-phrojekthi ahlanganisa uhlelo lokutshala, nokufuywa kwezinkukhu nezingulube lapho abantu bebekhulisa lemfuyo bese begcina amachwane azo.
Umasipala wase-Ethekwini uthanda ukudlulisa amazwi enduduzo emndenini nakubangane baDesmond Makhanya. Sengathi umphefumulo wakhe ungaphumula ngokuthula!